Mihoatra ny demografika: karazana fizarana mombamomba ny mpihaino mandroso izay mitondra fifamatorana tsy azo refesina | Martech Zone
Ankoatry ny demografika: karazana fizarana mombamomba ny mpihaino mandroso izay mitarika fifampiraharahana azo refesina
Alatsinainy Desambra 14, 2020 Alatsinainy Desambra 14, 2020 George Rowlands
Misaotra an'izay mpampianatra inoanao ho an'ny Marketing Automation ary ny fahantrana omena ny mpivarotra. Matetika, mampiasa Marketing Automation izahay amin'ny fitarihana sy fitarihana fitarihana. Azo tanterahina izany amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra mitete, ary fampandrenesana mandrisika ny fitondran-tena mba handraisan'izy ireo hetsika. Mail Merge dia endrika iray hafa nalefa avy any an-danitra. Ny fotoana ahafahana mampiditra ny anaran'ny mpandray tokana amin'ny lohahevitra sy ny andalana voalohany amin'ny mailakao dia mpamadika fiovam-po tsy misy diso…
Ny marina dia tsy ilay Marketing Automation fotsiny afaka mandehana lavitra kokoa; io koa no izy zavatra ilaina handeha lavitra kokoa. Niantso ny anarany voalohany izy ireo, fa ny ambin'ny mailaka nataonao dia humdrum, efa-natao-izany, ary tsy an'ny tena manokana. Ny atiny tena miavaka dia mitaky zavatra bebe kokoa. Manokana, mila fizarana mazava tsara, mihoatra ny demografika, ny fahalalana ny mpanjifa, ny fahatakarana ny zavatra tadiaviny ary ny firesahana mivantana amin'ny filan'izy ireo.
Ny fizarana marketing dia mihoatra ny demografika
Fizarana mpihaino tsy zava-baovao. Indrisy, tsy vao izao fa izao dia ny ambany indrindra; andrasana amin'ny ekipa marketing amin'ny indostria rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny fanavahana sy fanasoketana ny mpihaino ara-barotra ho an'ny subgroups, mifototra amin'ny toetra samy hafa ananany sy ny toetra zarain'izy ireo. Efa fantatrao izany, ny olon-drehetra no manatrika azy. Mety izany ary miteny ho azy ny statistika.
76% ny mpanjifa manantena ny orinasa iray hahafantatra ny safidiny.
Ny demografika no endriny voalohany, mahazatra indrindra amin'ny fizarana mpihaino. Fa maninona no tsy izy ireo? Izy ireo dia manavaka ny olona samy hafa mifototra amin'ny toetra mampiavaka azy ireo toy ny taona, ny toerana ary ny firaisana ara-nofo, mba hanonona vitsivitsy. Saingy androany, tsy io no fizarana be sy farany. Tsy ampy ny mampivelatra sy misaraka mifototra amin'ny zavatra tsy dia misy dikany toy ny hoe avy aiza izy ireo na firy taona. Tsy miteraka fanaingoana manokana izany fa tombantombana amin'ny fahaizana. Mendrika tsaratsara kokoa ny mpanjifanao.
Mendrika tsara kokoa ny orinasanao. Ny fanaingoana tsara ny votoatin'ny fanentanana sy ny marketing dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny ho avy.
Karazana 1: fizarana miorina amin'ny haitao
Izay lazain'ny teboka angona demografika amintsika izay mividy zavatra, lazain'ny teboka angona psychographic amintsika Nahoana mividy azy ireo olona ireo. Ny angon-drakitra ara-psikografika dia azo ampiasaina amin'ny orinasa rehetra handraisana antony manosika izay mitondra ny fividianan'ireo mpihaino azy. Ireo orinasa manao an'io karazana fikarohana io matetika dia mijery ny mpanjifa soatoavina, fomba fiainany, satan'ny kilasy, hevitra, finoana, ary hetsika isan'andro.
25 ho 30
Vola miditra ~ $ 25,000
Mipetraka ao an-tanàna
Mikarakara momba ny bika aman'endrika
Mpihazakazaka mahay sy mpilalao baolina kitra
Fotoana fitsimbinana betsaka
Young Professional; Career-noroahina
Psychographic dia mamela ny mpivarotra hamerina ny personalization ny fanatontosana azy amin'ny notch roa. Ny angon-drakitra mahomby sy madio voazarazara dia mamela azy ireo hiresaka amin'ny fitenin'ny mpanjifany amin'ny ambaratonga mampihetsi-po, hahafantatra tsara ny fomba fiasan'ny vokatra sy ampiasain'izy ireo, ary hifantohany amin'ireo fiasa izay mahasarika azy ireo indrindra. Manome azy ireo hevitra tsara kokoa momba ny toerana ipetrahan'ny vokatra amin'ny fiainany izy ireo, manome hery azy ireo hanatsara ny fandefasan-kafatra momba an'io.
Ahoana? Ny fizarazaran-tsaina dia mitaky famakafakana ny fihetsiky ny mpihaino hafa alohan'ny hanasarahana azy ireo. Mampiasa fikarohana kalitao atao amin'ny alàlan'ny loharanon-karena an-tsitrapo toy ny fanadihadiana, dinidinika ary fanadihadiana mba hamoahana teboka data manokana momba ny mpandray anjara tsirairay. Ireo fanontaniana dia afaka manarona lohahevitra miankina amin'ny indostria. Ohatra, ny orinasa B2B dia mazàna mifantoka asa-hatao ary fanontaniana momba ny fampandrosoana ny mpanjifa. Ireto andalana fanontaniana ireto dia manampy amin'ny fanazavana ny fomba fampidirana ny vokatra amin'ny asan'ny Ideal Customer Profile (ICP) isan'andro, ary ny fomba ahafahan'ny vokatr'izy ireo manafaingana ny valiny.
Tsarovy. Misy tsipika tsara eo amin'ny personalization marina sy ny fanitsakitsahana tanteraka ny fiainana manokana. Mazava ho azy fa tokony hanangona angon-drakitry ny mpampiasa fotsiny ianao miaraka amin'ny alalàn'izy ireo, fa tokony ho azonao antoka koa fa tsy tena manokana sy manafika loatra ny zavatra angatahinao amin'izy ireo. Noho io antony io dia mety ho fanamby ny fahazoana angona psychographic. Ny hevitra tsara dia ny manolotra atiny manokana, mahasoa, freemium ho setrin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo, na fidirana am-boalohany manokana ho an'ny vokatra na asa novolavolaina vao haingana.
Karazana 2: Segmentation miorina amin'ny sandan'ny mpanjifa
Ny fizarana miorina amin'ny fahalianana dia mijery manokana ny karazana atiny izay lanin'ny mpanjifa, ny fitarika ary ny mpanjifa misy. Ny fizarazarana dia natao manokana hanosehana ireo mpampiasa ireo hidina any ambanin'ny fantsona, amin'ny alàlan'ny fanolorana afa-tsy ny lanja sy ny fahaizana rehefa mitady ny vokatra. Ohatra, raha ny iray amin'ireo vinavinantsika dia nisoratra anarana tamin'ny lisitry ny mailaka noho izy ireo nisintona ny mailaka mailaka mailaka hataonay, dia azontsika atao ny mametraka azy ireo amin'ny vondron'olona liana amin'ny mailaka mangatsiaka.
Tsy hoe rehefa mamaky ny atiny fotsiny ianao dia manantena ny hividy ny vokatrao.
Tena marina ilay fanambarana etsy ambony. Saingy ny fizotry ny fivarotana miorina amin'ny sandany dia mifototra amin'ny fahatakarana sy fanamafisana ny antony mahatonga ny vokatra ilaina amin'ny vinavina. Raha manamarika aho fa misintona ireo torolàlana momba ny mailaka mangatsiaka amiko dia mety ho liana amin'ny atiny mailaka mangatsiaka kokoa toa ny lahatsoratry ny bilaogin-dahatsoratra aho; ny 'fomba hahitana adiresy mailaka' mandeha an-tongotra.
Amin'ny farany, ny mpivarotra dia afaka mampitombo ity fanentanana ity ary manosika ireo vina lavitra hidina lavitra kokoa amin'ny alàlan'ny fanolorana azy ireo demo mitarika ny varotra ny vokatra. Ny valisoan'izy ireo dia vokatra azo zahana sy azo zahana amin'ny fidiran'izy ireo. Mandritra ny fandrosoana dia afaka mandefa mailaka marobe amin'ny ambaratonga izy ireo, alohan'ny hamakafakana ny zava-bitany ary hanatsara ny zava-bitany hahazoana ny zotram-pifandraisana tsara kokoa.
Karazana 3: Segmentation miorina amin'ny sandan'ny orinasa
Ny fizarana miorina amin'ny sandany dia paikady fizarana izay mametraka ny vinavina, ny mpitarika ary ny mpanjifa ao anaty vondrona mifototra amin'ny ohatrinona sanda azon'izy ireo omena amin'ny orinasa. Mazava ho azy fa tsy hoheveriko ho teknikan'ny fizarazarana manokana-mitondra fiara manokana ity. Saingy, taorian'ny nataon'ilay areti-mandringana tamin'ny tontolon'ny asa, dia io no tsy hitovizan'ny fizarana mandaitra sy tsy mandaitra mandroso.
Tonga ny fahefana mividy so ampoizina mihitsy. Ny fomba ny areti-mandringana sy ny fanidiana hidiny manaraka nisy fiantraikany tamin'ny orinasa samihafa amin'ny indostria isan-karazany dia diso ara-dalàna tanteraka. Ohatra, ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana eCommerce dia niroborobo, fa ny orinasan-dia dia nalohalika. Ny fivarotana orinasa dia mila manaiky an'io ary mahazo an-tampony, mampisaraka ny mpanjifany arakaraka ny fiantraikany. Avy eo, afaka manolotra atiny manokana sy feno fangoraham-po izy ireo ary tolotra hanampiana ny mpanjifany.
Ahoana? Mila mampiasa traikefa ho an'ny mpanjifa mifanakalo resaka ny orinasa. Aza mipetraka ary miandry ny fangatahana fanafoanana; manantona ny mpanjifanao amin'ny fanontaniana mifanakalo na fifanakalozana varotra mety mifandraika amin'izy ireo. Asehoy ny fiahiahy, ny fiaraha-miory, ny fiombonam-po ary ny faniriana marina hanampy azy ireo amin'ny fotoana ilainy. Mijanona dingana iray mialoha, dia tsy ho diso aoriana ianao.
Ataovy ao anaty fononteny ireo orinasa miorina amin'ny fahasarotany. Raha nijaly izy ireo, dia mety ho mora manararaotra ny tolotra fihenam-bidy. Raha miroborobo izy ireo dia mety ho vonona amin'ny famoahana vokatra mitovy amin'izany.
Karazana 4: Fizarana miorina amin'ny fampiroboroboana
Ny lesona farany ao amin'ny Fizarana mandroso Ny kilasy dia ny fananana seha-pihainoana mifototra amin'ny fifandraisany amin'ny marika. Izy io dia sombin'ny fizarazarana ara-psikolojia, ary mandinika ny fomba ifandraisan'ny vina sy ny mpanjifa ary ny mpanjifa misy amina marika manerana ny sehatra maromaro. Media sosialy izany, tahan'ny misokatra, click-throughs, ary io no fitaovana manokana ampiasain'izy ireo handevonana ny atiny.
Antony telo lehibe mahatonga ny firotsahana:
Fifanekena, hatetika, fiantsoana andraikitra.
Raha efa fantatrao fa tsy manokatra mailaka anao ny vinavinanao dia tsy ilaina ny mandany fotoana amin'ny fandefasana azy ireo mailaka fanarahana fanampiny fito. Mifanohitra amin'izay, mety ho tsikaritrao fa manokatra mailaka matetika ny vinavinan'olona fa tsy mamaly. Mety ho mendrika ny hametraka azy ireo ao anaty vondrona mpandray anjara avo lenta izay misokatra hanaraka na mety mila andalana fanentanana hafa.
Ny personalization dia fitsapana A / B ny andalana foto-kevitra hahitana ny marina izay manokatra ny fisokafany. Tolotra natokana ho azy noforonina tamin'ireto lohahevitra ireto mba hampitomboana ny fifamofoana sy ny fahafahan'ny fiovam-po. Mandefa fanampiana amin'ny mailaka amin'ny fotoana mety indrindra hanokafan'izy ireo izany. Mandefa azy ny ora sahaza azy, mba tsy hihoatra ny sain'ny mpandray anao.
Ahoana? Ny fizarana fifampiraharahana dia azo atao mifototra amin'ny valin'ny fanarahana mailaka manara-maso ny fifandraisana rehetra. Matetika, tafiditra amin'izany ny fampiasana rindrambaiko izay mampiditra pikantsary fanarahana maso kely anaty mailaka. Rehefa nosokafana ireo piksela fanarahan-dia ireo dia mandefa fangatahana fampidinana any amin'ireo mpizara mpanjifa mpanara-maso izy. Isaina ho a View. Avy amin'izany, ny mpampiasa dia afaka mahita hoe iza, oviana ary fitaovana iza no nanokafana ny atiny.
Tsarovy. Ny mailaka fotsiny no tiako horesahina amin'ity ohatra ity satria izany no mampandainga ny akany. Ny mailaka no endrika mahazatra indrindra amin'ny fanentanana amin'ny marketing, azo antoka. Rehefa miditra amin'ny taona vaovao isika dia mahita sehatra maro kokoa tonga eo amin'ny lampihazo, toy ny chat mivantana, media sosialy, ary sehatra anaty fiarahamonina anatiny. Tokony hanaraka ireo fifandraisana ireo koa isika ary hitazona traikefa manokana ho an'ireo fantsona samihafa ireo.
Mihoatra lavitra ny demografika ny fizarana mpijery. Mijery ny antony manosika ny mpividy sy ny toe-javatra izany. Mijery izay tadiavin'izy ireo izany mba hahafahanao manome azy ireo izay tadiaviny. Io no lakilen'ny fitomboana ankehitriny.
Ka andao hitombo.
Tags: fiaraha-mientanafandraisana anjara amin'ny mpihainofizarana mpihainofinoanaantony manosika ny mpividyfizarana mpividykilasy kilasyfizarana sanda ho an'ny mpanjifaMponinafizarana marketing amin'ny mailakafomba fiainanaautomation marketingfizarana automation marketingfizarana marketinghevitrapersonalizationpsychographicpiraofilina ara-tsainafizarana ara-tsainasalesforcesegmentationsoatoavina
George no lohan'ny tetikady atiny ao amin'ny NetHunt CRM. Anjarany ny manoratra. Mamirapiratra amin'ny indostrian'ny teknolojia sy B2B izy, manarona lohahevitra maromaro hatramin'ny famokarana ka hatramin'ny paikady varotra sy ny fifandraisan'ny mpanjifa. Mampifandray ny elanelana misy eo amin'ny angon-drakitra sy ny atiny famoronana izy amin'ny alàlan'ny fipoahana.
Famaritana: Fanaraha-maso laza, fanadihadiana ny fihetseham-po ary fanairana momba ny fikarohana sy ny haino aman-jery sosialy